Dadka soo galootiga ah oo shaqooyin badan ka helay Sweden | Somaliska
Warbixin ay soo bandhigtay Hay’ada Tirakoobka Sweden (SCB) ayaa lagu sheegay in ilaa sanadkii 2006 ay dad gaaraya 230,000 ay heleen shaqooyin cusub. Dadkaas ayaa inta badan waxay ahaayeen soo galooti. Tirada shaqooyinka ay heleen soo galootiga ayaa lagu sheegay in ay gaarayso 160,000 taasoo u dhiganta qiyaastii 70% dhamaan shaqooyinka cusub.
Wasiirka isdhexgalka Erik Ullenhag oo la hadlay idaacada Sweden (SR) ayaa u sheegay in arintaan ay tahay horumar fiican isagoo intaas ku daray in ay ku guuleysteen in ay shaqo u abuuraan dadka ay ku adagtahay shaqo helida. Balse waxa uu qirtay in wali ay jiraan culeysyo qaasatan xaga dhalinyarada ah.
Warbixintaan ayaa ah sawir ka duwan midka dhabta ah ee ka jira Sweden oo ah meel ay ku adagtahay in dadka soo galootiga ah ay shaqo ka helaan. Dadka soo galootiga ah ee aan shaqada haysan ayaa aad uga badan kuwa Swedishka ah. Waxaa lagu qiyaasaa in qofka cusub ee wadanka Sweden soo gala ay ku qaadan karto ku dhawaad 10 sano in uu shaqo helo.
Ha iloobin waqtigii waa la badalay
Meesha shaqo kuma hayaan ee waxay ku hayaan lacag ay beenbeen ku qaataan oo ay yiraahdaan dadkaas ayaan wax u qabanay been iyo turuufo ah hadana Soomaalidii ayaa ishaas fahamtay oo wadadaas raacday. Ha la tashodo waxaa warbixin sax ah in illaa 10 sanno ku dhawaad shaqo looga helo wadankaan. Iyo waliba waxaa adaga in sahal lagu helo leysonka baabuurta oo u dhigma waxbarasho jaamacadeed.
waxaas waa sheqo
November 28, 2013 at 12:36
Wadankan shaqo iyo fursad waxbarasho way yaalaan laakiin dadkeena ku cusub wadanka waa inaynu fahanaa sidaynu uga faa iidaysanlahayn.
Waxaan idinku caawinkaraa talo fiican cidii daneenaysa: Wadankan hadaad doonayso inaad ka shaqaysato marka ugu horaysa luuqada xooga saar waa furaha koowaad ee guushada, kadibna waa inaad samaysataa oo waliba barataa xirfad ka mida xirfadaha wadankan looga shaqaysto ee ad waliba isleedahay waad ku fiicnaan doontaa. Hadaa sidaa samayso waxaa si fudud ku heli doonta shaqo iyo waliba saaxiibo wanagsan oo mar walba ku garab istaaga.